IStudio @ Pilliga Pottery Creative Farmstay
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uRegina iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Studio yindawo ebanzi, enobuhlobo kunye neyokuphumla yokuhlala. Inamagumbi okulala ama-3 awodwa, afakelwe iibhedi ezenziwe ngezandla. Kananjalo inendawo enkulu evulekileyo enesicwangciso esinekhitshi, indawo yokutyela kunye negumbi lokuphumla elinomabonakude, imidlalo kunye neencwadi. Ebusika kukho isifudumezi-zinkuni (iinkuni ezibonelelwayo) kwaye ehlotyeni zipholiswe ifeni kwaye wamkelekile ukuba usebenzise idama lokuqubha lamanzi anetyuwa asemhlabeni.
Isitudiyo sime nje ecaleni kwendawo yokusebenzela yePilliga Pottery kunye neBlue Wren Bush Cafe iyenza ibe lula kwaye ibe nomoya.
IBarkala Farmstay yifama esebenzayo yaseOstreliya kwaye ikwalikhaya lePilliga Pottery edumileyo. Ifumaneka kwi-30km nje kuMantla e-Coonabarabran, i-NSW le ndawo yokuhlala yasefama inika ithuba elikhethekileyo lokuva ubomi basemaphandleni kwiFama yase-Australia.
Iindwendwe zingabandakanyeka kwimisebenzi yemihla ngemihla yasefama efana nokusenga inkomo (ngexesha lonyaka), ukondla iibhokhwe, iigusha, iponi, iihagu, iihagu, ukuthosa imarshmallows emlilweni (ngaphandle kwexesha lomlilo wamatyholo kuphela) okanye ukuhamba naliphi na inani le-60km yokuhamba emahlathini. iingoma ezinqumla kwifama yeehektare ezingama-12,000.
Le fama ikhethekileyo lithuba lokubonisa abantwana ubomi bokwenyani belizwe ngokubavumela ukuba baphonononge iipeni zezilwanyana, iigadi kunye neepaddokhi. IFama yaseBarkala inobubele kwizinja.
I-Pottery inikezela ngezandla zasimahla kumdlalo wodongwe kunye neeklasi zobumba kwaye kukho i-onsite cafe (Nceda ujonge ngezantsi iiyure zokuvula i-cafe)
Le fama ikwanayo indawo yokuqubha esemhlabeni, ibala lebhola yevoli, ibala lokudlala labantwana abancinci kunye negumbi elaneleyo lemidlalo yebhola.
Iindwendwe zinokwenza okuninzi, okanye kancinci njengoko zinqweneleka ngelixa zihleli efama.
Lindela amava awodwa xa uhlala eBarkala Farmstay, ayilibaleki ngokwenene.
Akukho ulwamkelo lweeselfowuni kuninzi lwefama. Ulwamkelo lwethutyana lunokufumaneka kwezinye iindlela zokuhamba ehlathini. Essential Wifi ifumaneka kwi-onsite cafe ngee-imeyile kuphela. Ifowuni iyafumaneka kwisitya sodongwe ukuze iindwendwe zisebenzise nanini na, ngaphandle kwentlawulo.
4.64 ·Izimvo eziyi-37
4.64 · Izimvo eziyi-37
Ubumelwane bethu buchazwa ikakhulu ngokunwenwa kakhulu, ngenxa yobukhulu bepropathi: ummelwane wethu okufutshane umgama oziikhilomitha ezimbalwa. Nangona kunjalo, oku kuthetha ukuba kukho indawo eninzi yasimahla kwipropathi yethu yokuzulazula, kunye neembono ezinkulu zepanoramic kwi-lookouts. Qiniseka ukuba awuziphosi xa usindwendwele!
Sivulelekile ukukunceda nangaliphi na ixesha ngexesha lotyelelo lwakho, cela nje ilungu labasebenzi bethu abanobuhlobo; ngamanye amaxesha basenokungakwazi ukukunceda, kodwa baya kumazi onako.